Ciidanka Badda Ee Maraykanka Oo Qabtay Doon Siday Hub Oo Maraysay Gacanka Cadan • Oodweynenews.com Oodweyne News Somali News | Oodweynenews.com Oodweyne News Somali News
Ciidanka Badda Ee Maraykanka Oo Qabtay Doon Siday Hub Oo Maraysay Gacanka Cadan
Saraakiisha oo ka gaabsaday in magacooda la sheego ayaa sheegay in arrintaas ay dhacday qiyaastii laba todobaaad ka hor. Waxay sheegeen in ciidan la socday markabka USS JasonDunham ay fuuleen doonta. Doontaas ayaa ahayd nooca yaryar ee saxiimadaha ah.
Sarkaal ka tirsan waaxda difaaca ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo halka hubkaas loo waday, wuxuuse sheegay inay baarayaan. Gacanka cadmeed ayaa ka mid ah marinnada ugu mashquulka badan ee Yurub, Aasiya, iyo bariga dhexe ku xira Yemen oo dhanka waqooyooi ah iyo Soomaaliya oo dhanka koofureed ah, iyo badda Arabian oo dhanka bari ah.